ဘုရား ဖူးမရသောယောဂီများ မေးလေ့ မေးထ ရှိသော မေးခွန်းများ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ဘုရား ဖူးခန်း သင်ခန်းစာ ရောက်လို့ ဘုရား ဖူးမရသော ယောဂီများ မေးလေ့မေးထ ရှိသော မေး ခွန်းများ ကို ခြုံ၍ ရေးပေးလိုက် ရပါသည်.မည်သို့သော ရေးနည်းဖြင့် ရေးပေးလျှင် အတိုချုပ်နှင့် အရှင်း ဆုံး ဖြစ်နိုင် မလဲ ဟု စာရေးသူ အမြဲ စဥ်းစား လေ့ ရှိပါ သည်။ သို့သော် အတို ချုပ်ရေး ၍ လည်း နား မလည် နိုင်ကြပေ ..အတော် အခက် တွေ့ရ ပါသည်.. ယောဂီတွေ ကို ကူညီ ပေးချင် သော ဇောဖြင့် စာများ ရေးပေးလါခဲ့သည် မှာလည်း အတော်ကို များပြားခဲ့လေပြီ… ဘုရားဖူးခန်း သင်ခန်းစာ ရောက် လျှင် တူညီသော မေးခွန်း များကိုသာ မေးတက် ကြ ပါသည်.. အတိုချုပ် ဖြေ ပေးလိုက် လျှင်လည်း နောက် တခု ထပ်မေး တက်ကြ ပါသည်…အရမ်းကို နားလည် စေချင် မိပါ သည်….ဟို နေ့ က post တ ခု ရေး ပေး လိုက်သော အောက်တွင် မေး ထားသော အဖြေ များ ကို တော့ တဦးချင်း စီ ဖြေပေးချင်တာမို့ အဲ့ဒီ မေးခွန်းအတွက် အဖြေ သီးသန့်တော့ မဟုတ် ပေမယ့် ..နားလည် နိုင်မယ် ဆိုလျှင် ဖြင့် ယခု စာလေး ကို ဖတ်ပြီး လျှင်လည်း သဘောနဲနဲ ပေါက်နိုင်မယ် လို့ ထင်မိ ပါ၏.. တယောက် ချင်းစီ ကို အသေး စိတ်ကို ရှင်းပြ ပေးချင်မိတာပါ.. စာ တခါ ရေးရင် ၃နာရီ အကျော် လောက် အချိန် ပေးရ တာမို့ စာရေးသူ အတွက် အင် မတန် ကို စွန့်စားရ သလို ပါပဲ..ဖုန်းနဲ့ စာစီ ရတာမို့ အရမ်း ကို ကြာလွန်း လှပါတယ်..ဒါမို့ အတိုလေး တွေသာ ခြုံ ပြီး ရေးပေး ရပါတယ်..တကယ် ရေးပေး ချင်တာ က အသေး စိတ်ပါ..အချိန် အခက်အခဲကြောင့် စာ တပုဒ် ရေးဖြစ်ဖို့ အ​တော်ကို အချိန်ယူရတာမို့ပါ…ခုလည်း အတို ချုပ်လေး မနေ နိုင်လွန်းလို့ ရေး ပေးလိုက်ရပါသည်။
..မေးခွန်းတွေကိုတော့ မထည့်ပေးတော့ပါ..အဖြေများပဲ ရေးပေးလိုက်ရပါတယ်မေးခွန်း တွေက..ဘုရားဖူးတာ ဘယ်စိတ်နဲ့ ဖူးရတာလဲ.ဘယ်လိုအာရုံပြုရတာလဲဘုရားဖူးရင် အကြား အ မြင် တွေရသွားလားဘုရားဖူးလို့ မရဘူးဘုရားဖူးတာ ကိုယ့်အိမ်ကဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဖူးတာ တယောက် နဲ့ တယောက် နဲ့ ဘာလို့ မတူ တာလဲ.ဘုရားဖူး တာ စိတ်မှာ ပေါ်တော့ လာတယ် အဲ့ဒါ ဟုတ်ရဲ့ လားတချို့က ဘုရားဖူးတာစိတ်ကူးရင်တာလို့ရေးကြတယ် တကယ်ဖူးလို့ ရမရ ဘယ်လို သိရမလဲ ပုံရိပ် တခုတော့ ပေါ်တယ် အဲ့ဒါ ဘုရားဖူး ရတာလား..စသောစသော..များပြားလှသော မေးခွန်း များကို ခြုံဖြေ ပေးဖို့ အတိုလေး ရေးလိုက် ပါတယ်..အရှည်ရေးပေးဖို့အတွက် အချိန်ယူ နေပါ တယ်..ချစ် ရသော ယောဂီများ ရှင့်. .. ဘုရား,စေတီ, တောတောင်, ပုံသဏ္ဌာန် မျိုးစုံ,နှာဖျား နှာဝမှာ ပေါ်လာ တက်ပါ တယ် မီးခိုးရောင် အလင်းတန်း, အဖြူရောင် အလင်းတန်း သက်တံ ရောင်စုံ အလင်းတန်း,အရောင် အလင်းမျိုးစုံနိမိတ်တွေဟာ သမထဘာဝနာ ရှုပွားတဲ့ လူ တချို့ဟာ သမာဓိ အသင့် အတင့် ရှိလာ တဲ့ အခါ မျက်စိ, မျက်နှာ, ခန္ဓာကိုယ်တွေက ဘာဝနာ အလင်းရောင် ထွက်လာ တတ်ပါ တယ်။ (၁)နေရောင်(၂)လရောင်(၃)မီးရောင်(၄)ပညာရောင် ဆို ပြီး(၄)မျိုး ရှိပါ တယ်။ အဲ့ဒီ ထဲမှာ ပညာရောင် က (၄)မျိုးထပ်ကွဲ ပါတယ်….(၁)ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိ ညာဉ် မှ ထွက် တဲ့ အရောင် အလင်း၊(၂)အာလောက ကသိုဏ်း မှ ထွက်တဲ့ အရောင် အလင်း၊ (၃) ပရိကမမှသမာဓိ,ဥပစာရသမာဓိ,စျာန်သမာဓိ တို့မှ ထွက်တဲ့ အရောင်အလင်း၊(၄)ဝိပဿနာ ညစ် ညူး ကြောင်းဖြစ် တဲ့ ဥပက္ကိလေသ အရောင် အလင်း တို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ် ဘုရား။
ဒါတွေ အားလုံးဟာ ပညာရောင် ဆိုတဲ့ အတိုင်း ပညာဥာဏ် ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အရောင် အလင်းများ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကလည်းသမာဓိ စွမ်းအားရှိလို့ မြင်ရတဲ့ အရောင် အလင်း တွေပါ ဘဲ။ ဒါကြောင့် ဘာဝနာ ရှုပွားကြတဲ့ လူအများ စုဟာ သမာဓိ အတော် အသင့် မြင့် တဲ့ ပရိကမ္မ သမာဓိ အဆင့် ကစပြီး အရောင် အလင်း ထွက်လာ တတ် ပါတယ်။ သမာဓိ မြင့်လာတာ နဲ့ အမျှ အရောင် အလင်း ဟာ ပိုပြီး တောက်ပ စူးရှ လာပါ တယ်။ ဒီ အဆင့် မှာတင် တချို့က နိမိတ် တွေ ထင်နေ ပါပြီ.. တချို့ စူးစိုက် ရှုမှတ်ရင်း မျက်စိကို ကျိန်းစပ်စေတဲ့ အရောင် အလင်းများ တဖျပ် ဖျပ် ထွက်ပေါ် လာတတ် ပါတယ်။ မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးအစုံမှ စူးရှတဲ့ အလင်းတန်းများ ထွက် ပေါ်လာတယ်။တချို့ကျတော့ တစ်ကိုယ်လုံးက အလင်းများ ဖြာထွက်ပြီးလင်းလာတတ်ပါတယ်။ ဥာဏ် ထက် လျှင် ထက် သ လောက် မိမိ ထိုင် နေ ရာ အရပ်,တစ် ခန်းလုံး, တစ် ကျောင်းလုံး, တစ်တိုက် တာလုံး,တစ်ဂါဝုတ် နှစ်ဂါဝုတ်, တစ်ယူ ဇနာ နှစ်ယူ ဇနာ စသည်ဖြင့် အလင်းထွက်ဖြာ တတ်ပါ တယ်။ ဘယ်လို အလင်းမျိုး ပေါ်ပေါ် အလင်းမှာ အာရုံမစိုက်ပဲ မူလရှုမှတ်မှု ကမ္မဌာန်း ကိုဘဲ စူးစိုက်ရှုနေရပါမယ် သည်တော့မှ သမာဓိ အားခိုင်မြဲလာပြီး အလင်းလည်း ခိုင်မာလာပါ လိမ့်မယ်။ အလင်း မခိုင်မာခင် အလင်းဆီ အာရုံ ရောက်သွား ရင် အာရုံပျံ့ လွင့်သွား ပြီး၊ အာရုံ ကျဲ သွားပြီး အလင်း မှိန် သွားပါ လိမ့်မယ်။ ဥပစာရသမာဓိ အဆင့် ရောက်မှ ထွက်တဲ့ အလင်း ရောင်ဟာ မော်တော် ကားမီး,မာကျူရီ မီးလုံးများလို သာမာန်လင်းရုံသာ မဟုတ်ဘူး။ မျက်စိများ ကျိန်းစပ်အောင် စူးရှတောက်ပတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ် အသား အရေ,အဝတ် အစား,အိမ်နံရံ,ကြမ်းပြင်,သစ်ပင်စတဲ့ အတား အဆီးတွေ ကို ဖောက်ထွင်း သွားနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအလင်းအစွမ်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာရှိတဲ့ အကြည် ရုပ်များကိုလည်း မြင်နိုင်တယ်။အသား,အကြော,အရိုး,အဆုတ်,အသည်း,နှလုံး,စတဲ့ ၃၂-ကောဋ္ဌာ သတွေကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။ရုပ်ကလာပ်အမှုန်များကိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။ မိမိခန္ဓာ ကိုယ်မှ ကောဋ္ဌာသများကို ပိုင်းပိုင်း ခြားခြား ရှုမြင်နိုင်သလို သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ ကောဋ္ဌာသ များကို လည်း မြင် အောင် ရှုပွား နိုင်ပါ တယ်။ နိမိတ် ဆို တာက အာရုံ မှာ ထင်လာ မြင်လာတဲ့ အရာ တွေကို ခေါ်တာပါ။ဘုရား,စေတီ,တောတောင်,အရောင်အလင်းမျိုးစုံကို ပြောတာပါ။သူက အာရုံမှာ ထင်မြင်လာ တဲ့အရာတွေပါ။ ဘာဝနာ အလင်းရောင် ဆိုတာက မျက်စိ, မျက်နှာ, ခန္ဓာ ကိုယ်က ထွက်တဲ့ အလင်းရောင်။ ပညာဥာဏ် ကြောင့် ထွက်လို့”ပညာရောင်”လို့ခေါ် ပါတယ်. “ပညာအလင်းရောင်”ဆိုတဲ့အတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အပြင်ကို အလင်းရောင်တွေ ထွက်တာ ပါ။. အဲ့ဒီ လို သမာဓိ မျိုး ရ ရှိပြီ ဆိုမှ ဘုရား ဖူးရတာ ရှင်းရှင်း မြင်ရ ပါတယ်.. သိပ်မရှင်း တာတို့ ဘာ တို့က သမာဓိ နဲနေသေးလို့ပါ.ပေါ်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ အမျိုးမျိုး ပေါ်လာမှာပါ တချို့များ ရင်ထဲ လှိုက်ဖို သွား ရ လောက် အောင် အမြ င်မှာ တ ခါ မှ မမြင် ဖူးတဲ့ အရောင် အဆင်း တွေ နတ်နဂါး ကျောက်သံပတ္တမြား စသော လိုချင်တက်မက်စရာတွေလည်း ပေါ်လာတက်ပါတယ်…ဒါတွေဟာ သမာဓိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ နိမိတ်တွေပါ..အဲ့ဒီ နိမိတ် တွေထဲက ဘယ်တခု ကိုမှ အာရုံမပြုပဲ..ဘုရားဖူးခိုင်းတဲ့ အာရုံဆီကို လွှဲယူပေးလိုက်တာပါ.။
အဲ့လို ပေါ်လာ သမျှ အာရုံတွေ နောက်ကို မလိုက် စေလိုတာကြောင့် တကြောင်းဘုရားဖူးလို့ရတဲ့ သဒ္ဓါ တရား ကို ယူစေ ချင်တာ က တကြောင်း မို့ပါ..”ပရိ ကမ္မနိမိတ်”(အစပျိုးတဲ့ နိမိတ်) လို့ခေါ် တယ်။ အဲ့ဒီ နိမိတ်ကို အာရုံ မပြုဘဲ မူလ ရှုမှတ် နေတဲ့ ဝင်လေ ထွက်လေ ကမ္မဌာန်း ကိုဘဲ ဆက် လက် ရှုမှတ် ရင်း တ ဖြည်းဖြည်း နိမိတ် က”ဖြူဆွတ်”လာရင် အဲ့ ဒါ ကို”ဥဂ္ဂဟ နိမိတ်”လို့ ခေါ်ပါ တယ်။ ဒီနိမိတ် မျိုး ရပြီး သူမှသာ ဘုရားဖူးရတာ အဆင်ပြေ ပါတယ်..ဒါမို့ မိမိသည် ယခု ပြောခဲ့ သော ပညာရောင် အလင်း ရပြီး မှသာ ဘုရား ဖူးလို့ ရပါတယ်..မဟုတ် ရင် သမာဓိ နည်းနေသေး တာကြောင့် အာရုံ ညွှတ်လို့ မပေါ်နိုင်သေးပါ..အဘိညာဥ် တန်ခိုး နဲ့ သိရတဲ့အရာ မဟုတ်တဲ့ မည် သည့် အာရုံ ကိုမှ အတည် လို့ တကယ် လို့ သတ်မှတ် လို့ မရတာ ပါ ရှင့် စိတ်ဟာ အာရုံကို သိတဲ့ သဘော မို့ မိမိစိတ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ အာရုံကို မိမိက သိတယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပဲ ယုံကြည် ခိုင်း တာပါ ရှင့်. တကယ် အာရုံ မှာ လာထင်တဲ့ ပုံရိပ် နိမိတ် တွေဟာ ဆိုရင် မရေ မတွက် နိုင်လောက် အောင် များပြား လွန်းလှ တာပါ..ဒါမို့ ဒီ နည်း စနစ်မှာ ဘုရားဖူးခိုင်းရတာ ဆိုတာဟာ မိမိတို့ ရနေ တဲ့ နိမိတ်တွေကို ဘေးချော်မသွားရအောင် ဘုရားအာရုံ ဆီကို လှမ်း တင်ပေးပြီး လမ်းတဲ့ ပေးတဲ့ သဘောမျိုးမို့.အာရုံမှာ လာထင်တဲ့ မည် သည့် ပုံရိပ်မဆို မိမိ အာရုံမှာ မြင်လာတာ ဟုတ်ပါတယ် လို့ ဆိုလိုခြင်းပါ ရှင့်..။
ပဋိဘာဂ နိမိတ်အရမ်းခိုင်နေရင် ပေါ်လာတက်တဲ့ အာရုံမျိုးစုံကို လည်း ခုလို ဘုရားဖူး ခြင်းမျိုးနဲ့ သဒ္ဓါ ဘက်ကို လှည့်ပေးတဲ့ သဘောပါ ရှင့်နိ မိတ်ဆိုတာ စိတ် ကို ခေါ်တာပါ စိတ်ကို နာမည် တပ် ထားတာပါ. သမာဓိ အတိမ်အနက်ပေါ် မူတည်ပြီး စျာန်တွေကို အဆင့် သတ်မှတ် ပေးထါးတာပါ .ပဉ်စမစြာနျထိရောကျအောငျ အားထုတျပွီးမှ အဘိညာဥျကူး လို့ရတာပါ..ခု ဒီ နည်း စနစ်မှာက ပထမစျာန် လို့ခေါ်တဲ့ ပဋိဘာဂ နိမိတ် ကို ခိုင် အောင် လေ့ကျင့် ပေးတါ မို့. ဒီ စျာန် နိမိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ သမာဓိ ပေါ်မူ တည်ပြီး မြင်စိတ် တွေ ကွဲ ပြားသွားရတာပါ ရှင့်.မြင်ပုံမတူကြတာ စိတ်တွေမတူကြလို့ပါ.စိတ်ကလည်း အမြဲ ပြောင်းနေတာမို့ တခါမြင် တခါ ပြောင်းနေမှာပါ.. အာ ရုံဆိုတာလဲ အမြဲ မရှိပါဘူး.စိတျကလဲ မမွဲပါဘူး ခဏ လေးမျှ ပေါ်လာတဲ့ အာရုံကြီးများသာ ဖြစ် ပါတယ်..မမြဲရ ကောင်းလားမ ပေါ်ရကောင်းလား မကြာရ ကောင်းလား အကြာကြီး မြင် ချင်တာ စတာတွေဟာ လုပ်ယူလို့မရပါ..သဘာဝတရားကွီးကိုက မမွဲပါ..ပေါ်လာ သမျှ အာရုံလေး ကိုသာ ထိထိမိ မိ အာရုံ ပြုပြီး ကျေနပ် ပီတိဖြစ်တဲ့ ပီတိစျာန်လေးတွေကိုသာ ခံစားပြီး ရှေ့ဆက် ဝိပဿ နာ ဘာ ဝ နာ ကို ကူး ပြောင်း ရ မှာ ပါ…ဘယ် အာ ရုံ ပေါ် ပေါ် သမာဓိ ရှိ လို့ သာ ပေါ်လာ တာပါ. သတိ ထားလို့ သာ သိရ တာပါ ရှင့်..အကြား အမြင် ဆိုတာ တွေရ လာတက်ပါတယ် သို့သော် တ ကယ် မဟုတ်ပါ.မှန်တာရှိသလို မှားတာလည်း ရှိနေတက်ပါတယ်..။
ဒီ အဆင့်မှာ စိတ်ကို အမျိုး မျိုး မိမိကြိုက် သလို ပုံဖော် လို့ ရနေတဲ့ အဆင့်မို့ အားလုံး မိမိကြိုက် သလို စိတ်ကူးဖ န်ဆင်းလို့ ကို နေ ပါတယ်..သို့သော် ဒါတွေဟာ တကယ် မဟုတ်ပါ..စိတ်ကူး ဖန် ဆင်းထား သောစိတ် တုများသာ..ထိုအဆင့်မှာ သာယာပြီး လမ်းချော် သွားသူများ ရှိတက် တာမို့ သမထ ကျင့်မယ် ဆို ဆရာ လိုတယ် ပြောရတာပါ..ဒီလို အရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ လမ်း ချော်မှာ ဆိုးလို့ပါ..#အဘိညာဥ် ကြောင့်ရ လာတဲ့ တန်ခိုး အသိဉာဏ် တွေမဟုတ်တာမို့ အမြဲ မှန်တယ် လို့ ဆိုလို့မရပါ..အမှားအမှန်ကို သေသေချာချာ သိစေချင်လို့ ဘုရားဖူးခိုင်း ရတာမဟုတ်ပါ.. မိမိပက တိမျက် စိနဲ့ အပြင် မှာမြင်ရတာထက် ပိုမို ကြည်နူး စိတ်တွေ ​ သဒ္ဓါ တရားတွေ ယိုဖိတ်စေတဲ့ အ တွက် ကြောင့်မို့ သဒ္ဓါ ထက်စေရန် နှင့် သမာဓိ မြင့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖူးခိုင်းရတာပါ..။
နိမိတ်နဲ့ဖူးရတဲ့ ဘုရားက ပြန်ပြီး recall ခေါ်တိုင်း စိတ်မှာ လာထင်ပြီး ပီတိတွေဖြစ် ရတာမို့…အဲ့ ဒီ ပီတိစိတ်ကို ရစေချင်လို့ပါ..မိမိမြင်ရတာဟာ ဟုတ်တယ်လို့ ခံယူဖို့အရေးကြီးတဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိ မှသာ ရှေ့ဆက် တက် ရတာ အဆင် ပြေ ပါတယ်.မဟုတ်ရင် သို့လော သို့လောသံသယကြီး ရှိနေ ရင် တရား မ တက် တော့ပါ ဘူး..သံသယဟာ အရာ အားလုံး ရဲ့ block ပါ..အတို ဆိုပြီး အတော် ရှည်နေ လို့..ခဏ နားပါဦး မယျ..အချိန် ရ ရင် အချော နဲ့ အရှည် ရေးပေး ပါဦး မည်..ရှင့် ဤ အဖြေသည်လည်း ပြည့်စုံသည့် အဖြေများမဟုတ်သေးတာကြောင့်စာရေးသူ စာအရှည် အသေး စိတ်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ရှင့် ယောဂီ အားလုံးတရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်